miyaad ka shaqeyn kartaa ama iskaa u samayn kartaa ama ma waxaad ku kori kartaa dambi?
Feejignaan & Shaqooyin Xashiishad
Ma Dooneysaa Inaad Dhex gasho Wershadaha Xashiishadda?
Haddii lagu xiro oo aad noqotid a felon inta lagu jiro mamnuucida xashiishadda, markaa maqaalkan adiga ayaa loogu talagalay. Waxaan ka hadlaynaa isbeddello cusub oo ku saabsan horumarinta sharciga, laakiin waxaan diiradda saarnaa Illinois maxaa yeelay waxay ahayd waddankii ugu horreeyay ee sharci-dejinaya xashiishadda cannabis waxayna u baahday siyaasadaha cayiman ee sinnaanta qaarkood in lagu dhiso sharciga si loo saxo waxyeelooyinka lagu soo booqday dadka adiga oo kale ah. Dembiyada oo dhami maaha isku mid, oo sharciga 'cannabis' ee loo yaqaan 'Illinois cannabis' uma ula dhaqmo sida sidan oo kale. Haddii aad leedahay diiwaan dambi, sharciyo kale ayaa jira oo aan ka aheyn sharciga xashiishadda si loo go'aamiyo haddii lagu dhaqan-celiyay oo aad xaq u yeelan karto haysashada liisanka xashiishka.
Illinois waxay leedahay 98% Heerka Aqbalaada Felon ee Shatiyada
Qaybta Illinois ee shuruucda maaliyadeed iyo xirfadeed waxay soo saartay tirakoob ku saabsan kobcinta maskaxda - 98% codsadayaasha shatiga looma diidin sababtoo ah waxay horay u galeen dambi culus. Markhaati u ah Illinois oo isku dayaya inuu runtii caawiyo kuwa waqtigooda ku shaqeeyey inay ku soo laabtaan xoogagga shaqada.
Akhriso War-Saxaafadeedka oo keliya 2% ee Codsadayaasha loo diido sababao hore oo ah HALKAN.
Miyuu Felony Ka hortagayaa Nuqulkaaga Shatiga Xashiishka
Hey, waxaan ahay - i raadso adigoo gariiraya garyaqaanka cannabis ka dibna gujinaya barta websaydhka Qareenka Wershadaha Cannabis. com meesha aad ka heli karto nooc kasta oo faa iido leh macluumaad warshadeed cannabis - sida su’aashan oo aad muhiim u ah. Qofka dambiga galay ma heli karaa laysanka xashiishadda gobolka illinka. Tani waa dhacdo aad u dhib badan oo murugsan - laakiin haddii aad jeceshahay inaad isqoriso oo aad ila tiraahdid ilaa dhammaadka, markaa waad ogaan doontaa oo keliya arrimahaan oo dhan - laakiin sidoo kale sirta jiritaanka nolosha iyo wax walba.
Waan ka jawaabi doonnaa taas, laakiin waxaan jecelnahay muuqaalkan si aad uga hesho wararka ku saabsan sharciyeynta xashiishadda cannabis ee aan usbuuc walba u baahinno si aan kaaga ilaalinno halka ugu sarreysa ee sharci ahaan xashiishadda cannabis ay tahay qaran ahaan iyo gobolkaaga. Kaliya iska diiwaan geli si aad ugu biirto sharci-dejinta federaalka.
Marka haddii aad leedahay dembi culus laakiin aad rabto inaad gasho warshadaha xashiishadda, ma awooddaa? Waxay kuxirantahay gobolkaaga, laakiin waxaan eegeynaa maanta Illinois - taas oo loogu talagalay arrimaha caddaaladda bulshada sida ka caawinta dambiileyaasha inay awood u yeeshaan inay ku soo laabtaan warshado laga yaabo inay ku kalliftay sanado noloshooda, qoysaskooda iyo dhammaan noocyada dambiyada dagaalka ee adiga kugu saabsan. maxaa yeelay waxaan mamnuucnay ubaxdan - si fiican, haddaba aan u galno sharciga hadda.
Marka hore, aan xasuusnaano in ujeeddada sharcigu yahay in la xalliyo dhibaatooyinka dagaalka daroogada, iyada oo taas maskaxda lagu hayo sharciga Illinois ayaa si gaar ah u siinaya in qof kasta oo ay ku dhacdo baaritaanka asalka booliska booliiska gobolka - ama soo saaraya waaxda sameysa baaritaanka asalka. Tan - waxaan u weecanaynaa qodobka 5-aad ee sharciga Illinois
Qodobka 5-aad wuxuu la xiriiraa Maamulka Gobolka si uu ula tacaalo shati siinta ganacsiyada xashiishadda. Gaar ahaan soo saarista geedka waxay aadeysaa Waaxda Beeraha, halka ay weheliso khubaro la tacaali doonta Waaxda Maaliyadda iyo Xeerarka Xirfadeed.
Taasina waxay noo keentaa sharci cusub, Shuruucda Maamulka Caddaaladda ee Illinois ee waaxda xeerarka xirfadda - taasi waa sax, markii aad u maleyneyso in cannabis uu qabow yahay, waxaan helnay xeerar aan ku xallinno - gaar ahaan 3. Qeybaha 2105-131, 2105- 135, iyo 2105-205.
Saddexdaas qaybood waxaad baran doontaa in Gobolka Illinois uu leeyahay qodobka anshaxeed ee lagu dhisay - markaa ha u maleynin inaad iibsan karto oo dammaanad qaadi karto jidkaaga laysanka ama nidaamka ciyaarta, laakiin sidoo kale waxay u oggolaaneysaa dadka dambiileyaasha ah asalka si aad u sharraxdo sababta - oo aad u bixiso sababaha isaga iyo sida ay u beddeleen jidadkooda. Aan marka hore u rogno qaybta 3 - ee 'Code' Civil Ad Illinois:
Asal ahaan, asalkaaga dembiga waa in lagu daawan karaa lens baxnaanis ah oo loogu talagalay dembigaaga. Kuma filna in lagaa joojiyo gebi ahaanba warshadaha. Haddii lagu xukumay, waxay eegi doonaan waqtigaas, bal inay tahay qaab dhaqan xumo hore - iyo 8 wadarta arrimood oo yareynta - oo ay ku jirto da'da, dhammaystirka xukunka ee guusha. Caddaynta baxnaaninta iyo arrimo kale oo yaraynaysa.
Marka sheeg sheekadaada guusha ee ku saabsan sababta aad u tahay musharax wanaagsan in kasta oo taariikhdaada dembiga - dambiyada oo dhami iskama siman yihiin, farqi baa u dhexeeya dambiyada rabshadaha iyo dambiyada daroogada. Maxaad qof wanaagsan u tahay? Taasi waa muhiim - ma ogtahay sababta?
Waxaa jira qodobka anshaxeed ee lagu dhisay sharciga cannabis ee ku yaal Illinois - taasi waa waxa Qaybta 135 ay ku saabsan tahay - laakiin sida muuqata kaliya haddii aad xukun dembi ku heshay aqrintayada bogga 22 ee sharciga xashiishadda cusub - haddii aan lagu soo qaban markaas ka dib qodobka akhlaaqda suuban. waa inaanu dalban, laakiin wali waxaan u sheegayaa macaamiishayda inay wanaagsanaadaan, kaliya sida aan ku soo barbaaray oo aan wax ugu bartay iskuulka.
Marka maxaa dhacaya haddii laguu diido laysan sababtoo ah dambigaagii hore, markaa qaybta 205 ayaa wax ka qabta falka - eeg inay tahay inay daabacaan haddii ay qaadeen ficil edbin - sida dheh hoosta hoosaadka 6 halkaasoo ay ku leedahay tirada codsadayaasha dambiile darteed. xukun
Marka halkaa ayaad ku haysataa. Waad heli kartaa rukhsad haddii aad dembi hore gashay - laakiin waa inaad sharraxdid sababta ay u dhacday iyo sida aad ugu noqotey qof ka wanaagsan oo leh anshax wanaagsan akhlaaqda taasoo ka dhalatay deynta aad dib ugu soo celisay bulshada.
Waad ku mahadsan tahay sida aad noogu dhejisay falanqayntaas - oo xusuusnow inaad is qorto si aad u hesho ogeysiisyada wararka sharciyeynta daroogada cannabis usbuuc kasta - halkaas oo aad ka heli karto dhammaan cusboonaysiinta illaa iyo inta laga sharciyeynayo waddanka oo dhan. Ku soo arag
Daaweynta Dembiyada ee hoos yimaada Sharciga Cannabis badanaa waxay ku noqotaa Maamulka Maamulka qodobka sharciga.
ee Illinois qodobka 5 ee Sharciga Canshuuraha Cannabis
Waaxda Ag Scores Craft Grows
Qaybta Sharciga Maaliyadda iyo Xirfadeedka ayaa daboolaya Dispensaries Cannabis ee Illinois.
Sidee dambiga culus u saamaynayaa liisankayga xashiishadda?
Xadgudubkaaga ayaa saameyn ku yeelan kara ololaha liisankaaga xashiishadda sababta oo ah Gobollada ayaa raba inay hubiyaan inuusan xashiishad ka lumin, ama lacagteeda. Illinois waxay leedahay qaybo kooban oo quseeya haddii aad dambi leedahay - laakiin isla markaaba kuuma diidayo.
xukun hore oo dambi ah
ogeysiis qoraal ah
Codsiyada Xashiishadda ee Xukunka Dembiyada
tixgeli arrimaha yareynta
WAAXDA "waa" tixgelin doontaa arrimaha baxnaaninta
8 arrimood oo gaar ah si aad u aragto sida loo xukumo dambigaagii hore
xiriirka tooska ah ee dembiga
5 sano ilaa iyo
da'da waqtiga xukunka
xukunka si guul leh xukunka
caddeynta dabeecada jirta
arrimo kale oo yareyn kara
Sheegashada Anshaxeed Akhlaaqeed ee loogu talagay Felons oo leh shatiyada Xashiishadda
Waxay u egtahay in lagu dabaqi karo oo kaliya haddii lagu xukumo - markaa akhlaaq xumo uma baahna asal nadiif ah ??
wuxuu saameeyaa caafimaadka bulshada
ubaahan tahay akhlaaq wanaagsan akhlaaqda
ubaahantahay kalsooni shacabka
Daabacaadda Diidmada waxaa waajib ku ah Cannabis Felons ee Illinois
Ka eeg hoosaadka 6 shuruudaha daabacaadda haddii aad diidmo ka hesho xukunkaaga dembiga.
CBD iyo daryeelka maqaarka
by Lauryn | Sep 11, 2020 | Wararka CBD, Daryeelka maqaarka ee CBD, Hemp CBD, shirkadaha hemp
CBD iyo Daryeelka maqaarka - CBD ma u badbaado u yahay maqaarkaaga? Wax soo saarka maqaarka ee CBD waa mid caan ah, suuquna waa uu sii weynaanayaa. Sida lagu sheegay warbixin dhowaan soo baxday, suuqa daryeelka maqaarka ee caalamiga ah ee CBD ayaa la filayaa inuu gaaro 1.7 bilyan oo doollar sannadka 2025. Sarah Mirsini oo ka socota MĀSK ayaa ku biirtay ...
Xayeysiinta Sumcaddaada CBD
by Lauryn | Aug 25, 2020 | Xayeysiinta CBD, Ganacsiyada Cannabis Cancarta, Xayeysiinta Ururka Suuqgeynta Cannabis, Wararka CBD, Hemp CBD, shirkadaha hemp
Sidee loo Xayeysiiyaa Sumcadaaga CBD | Xayeysiyada Suuqgeynta Cannabis CBD iyo xashiishaddu kuma fududa sida xayeysiinta nacnaca nacnaca ah. Xeerarka iyo qawaaniinta lagu xayeysiinayo astaantaada xashiishadda canbaareyn ayaa laga yaabaa inay si dhib leh ku wareeraan. Corey Higgs oo ka socda THC Creative Solutions ayaa ku biiraya inuu na siiyo ...
Sharciyada Koonfurta Dakota Marijuana
by Lauryn | Aug 24, 2020 | 2020 Xakameynta Xashiishad Federal Cannabis Federal Project Marijuana, Ganacsiyada Cannabis Cancarta, Dhaqdhaqaaqa Cannabis, Sharciyeynta Cannabis 2020 Sharciga Dib-u-habeynta Maandooriyaha Keith Stroup NORML, Sharciyeynta Cannabis, Sharciyeynta Xashiishad Cannabis Lahadalidda Warshadaha, Cusboonaysiinta Wararka Cannabis, sharciyeynta wararka, Caafimaadka Marijuana, Sharciyada Koonfurta Dakota Marijuana
Shuruucda marijuana ee South Dakota South Dakota sharciyada marijuana si weyn ayey wax u beddeli kartaa markay tahay Noofambar. South Dakota waxay u codeyn doontaa labada xashiishad caafimaad iyo madadaalo doorashadan. Waxaan dhawaan ku biirnay Drey Samuelson iyo Melissa Mentele oo kasoo jeeda Koonfurta Dakotans ...